समाचार यो समाचार ‘अनलाइनखबर’ले किन सुटुक्क डिलिट गर्‍यो ? यस्तो थियो समाचार
अनलाइनखबरले आज असोज १ गते बिहान ९ बजेर ३३ मिनेटमा एउटा समाचार पोस्ट गर्‍यो। समाचारको शीर्षक थियो- डीएभी स्कूलले लकडाउनको शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निष्काशन गर्ने।
डिएभीकै एक अभिभावकले मलाई यो कुरा सुनाए। मैले ह्या, होइन होला। अर्कै कुन साइट देख्नुभो होला अनि, अनलाइनखबरले पनि त्यस्तो गर्छ त भनेँ। उनले हो भनेर जिद्दी गरे। उनले हाम्रोपात्रोमा चाहिँ त्यो न्युज छ। तर त्यसमा क्लिक गर्दा पूरा न्युज खुल्दैन भने।
हाम्रोपात्रोले विभिन्न अनलाइनहरुको समाचारको शीर्षक र थोरै विवरण राख्ने गर्छ। अचेल यो हामीलाई एकदमै फाइदाको कुरा भा छ। कसैले गलत समाचार हाल्यो भने उसको साइटमा गएर सच्याए पनि हाम्रोपात्रोमा भने जस्ताको तस्तै रहन्छ। कसैले समाचारै डिलिट गरे पनि त्यो यहाँ डिलिट हुन्न। किनभने त्यो अनलाइनले आफ्नो सर्भरमा मात्र कन्टेन्ट डिलिट गर्न सक्छ, अर्काको सर्भरमा गइसकेको कन्टेन्ट सच्याउन वा डिलिट गर्न सकिन्न।
अनलाइनमा एक पटक राखिसकेको सामाग्री पूरै कहिल्यै हट्दैन। कुनै न कुनै रुपमा त्यसको छाप रहिरहन्छ भन्ने सिद्धान्त छ। खोज्ने क्रममा गुगलको क्यासमा गएर यो समाचार बसेको भेट्टाएँ। त्यसलाई अर्काइभ पनि गरिहालेँ। अनलाइनखबरले सुटुक्क हटाएको समाचारमा के छ? यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्
यो त भयो विश्वका अभ्यास। नेपालको चाहिँ के छ त ? नेपालको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने खण्डको बूँदा ८ मा यस्तो लेखिएको छ।